Warka - Weli waxaad u isticmaashaa suufka cudbiyada lagu daweeyo nabarrada? Huai'an ZTE Pharmaceutical "Ayaa Kuu Soo Bandhigay Halbeegga Cunnooyinka cudbiyeedyada cudbiyeed ee cudurada aan nadiifka ahayn"
Maaddaama ay tahay shey muhiim u ah guriga, suufka suufku waa mid aad u habboon in la isticmaalo, haddii ay tahay aalad farshaxan oo lagu hagaajinayo faahfaahinta inta lagu jiro qurxinta, ama aaladda caawinta ee jeermiska iyo tirtirka boomaatada inta lagu jiro daaweynta dhaawaca. Gaar ahaan marka aad wajaheyso nabarrada ama dhibaatooyinka maqaarka cambaarta, si looga fogaado infekshinnada labaad, suufka suufka ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu tirtiro daawada. Xaqiiqdii, dhammaan suufka cudbiyuhu kuma habboonaan daaweynta nabarrada. Haddii suufka suufka aan si sax ah loo xusin, kaliya ma aha infekshannada labaad la iska ilaalin karo, laakiin sidoo kale Waxay sababi karaan nabarro ka sii dara
Alaab-qeybiyeyaasha gudaha ee qalabka caafimaadka ee xirfadleyda ah iyo waxyaabaha jeermiska dila ayaa sheegay in dhammaan suufka cudbiga loo isticmaali karin ujeedo caafimaad. Suufyada cudbiga ee caafimaadka waa in loo calaamadeeyaa inay yihiin "nadiif" iyo "la nadiifiyay" ka hor inta aan loo isticmaalin jeermiska jeermiska. In kasta oo suufku yar yahay, haddana qalabkiisa iyo farsamadiisa farsamaynta sidoo kale way wanaagsan yihiin ama xun yihiin. Si sax ah ayey u tahay fahamkan cilmiyaysan ee Huai'an ZTE cudbida cudbiga waxay noqon kartaa sumadda ugu horeysa ee cudurada suufka nadiifka ah.
Daaweynta madhalays ka dhigida: madhalaysnimadu waxay damaanad qaadeysaa badbaado badan Huai'an ZTE seminaaro iyo warshado soo saaris dhamaantood waxaa loo dhisay si waafaqsan qalabka caafimaad ee qaranka ee GMP si loo hubiyo in wax soo saar kasta oo la soo saaray uu buuxiyo heerarka caafimaadka. Huai'an ZTE suufka cudbiyeedka cudurada ayaa laga reebi karaa. Huai'an ZTE suufka cudurada ee cudurada waxaa lagu daaweeyaa tikniyoolajiyadda nadiifinta ee ethylene oxide oo si ballaaran loogu isticmaalo aaladaha caafimaadka si loo hubiyo in lagu hayo aseptic kahor intaan la isticmaalin. Waxaa loogu fuliyaa si adag iyadoo la raacayo shuruudaha farsamo ee ay dejisay diiwaangelinta cudbiska cudbiyeed ee cudbida. Si looga fogaado infekshinka nabarka labaad.
Suuf badan oo hadda suuqa ku jira looma calaamadeeyo inay yihiin "nadiif", sidaa darteed suufka noocan ah kuma habboona daaweynta dhaawaca, waana in si taxaddar leh loo xusho isticmaalka qoyska.
Cufka nuugaya heerka caafimaadka: jilicsan, raaxo leh oo hydrophilic badan
Iyadoo la tixgelinayo in suufka suufka loo isticmaali karo in lagu daaweeyo nabarrada nolosha qoyska, Huai'an ZTE Daawooyinka suufka jeermiska disha ee si nadiif ah looga baahan yahay naftooda iyadoo la raacayo heerarka caafimaad laga soo bilaabo bilowgii, ma aha oo keliya isticmaalka tikniyoolajiyadda jeermiska taranka ee ethylene ee habka wax soo saarka, laakiin sidoo kale xulashada qalabka. Xulo cudbi nuugaya daawada sida sheyga ugu weyn si aad u kordhiso raaxada isticmaalka. Cudbiga nuugaya daawada waxaa sidoo kale loo yaqaan "cudbi dawo leh". Kadib geedi socodka hoos udhaca, dusha sare waa dufan la'aan waxayna leedahay hawo-biyood wanaagsan. Way ku habboon tahay markaad tirtirto dawada dareeraha ah ama jeermiska dila jeermiska. Intaa waxaa dheer, suufka nuugaya caafimaadka ayaa ah mid jilicsan oo dhuuban, ma aha oo kaliya midab cad, laakiin sidoo kale jilicsan. Madaxa suufka laastikku wuxuu si fiican u daryeeli karaa maqaarka jilicsan.
Suufka cudbiga ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, dad badanina waxay u muuqdaan inay iska indha tirayaan ammaankooda. Huai'an ZTE Pharmaceutical wuxuu xasuusinayaa qof walba: Haddii suufka guriga lagu isticmaalo suufka lagu daaweeyo, waa inaad doorataa suufka nadiifka ah ee nadiifka ah, waxaadna u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato inaad ku dhejiso kaydinta maalin kasta si aad uga fogaato faddarada suufka.
Huaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd. waxay u heellan tahay inay dhisto madal sahay xirfadeed ku leh goobaha caafimaadka iyo caafimaadka oo leh badeecado sax ah iyo qiimo jaban, waxaana si qoto dheer loogu sharfay inay ku tabarrucaan xooggeena caafimaadka aadanaha. Iyada oo ku saleysan aqoonsiga macaamiisha Mustaqbalka, waxaan sidoo kale qaadi doonaa mas'uuliyadda hogaaminta warshadaha si loo gaaro horumar sare, oo aan si wada jir ah u dhisno silsilad wax soo saar warshadeed oo dhameystiran oo horseed u noqota ka qeyb qaadashada bilowga hore ee daryeelka caafimaadka loo dhan yahay.
Suunka Kalkaalinta, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Maaskaro ka hortagga fayraska, Maaskarada Neefsashada, Suufka Caafimaadka, Suufka jeermiska looga dilaaco,